Krismasy ao an-trano - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Krismasy ao an-trano
Saika ny olona rehetra te ho ao an-trano mandritra ny Krismasy. Azonao atao koa ny mahatadidy hira roa farafaharatsiny momba ity fialantsasatra ao an-trano ity. Amin'izao fotoana izao dia mihira hira toy izany ho ahy aho.
Inona no mahatonga ireo teny roa, ny trano sy ny Krismasy, saika tsy azo sarahina? Ireo teny roa ireo dia miteraka fahatsapana hafanana, filaminana, fampiononana, sakafo tsara ary fitiavana. Ny hanitra ihany koa, toy ny fanaovana biscuit, fanendasana amin'ny lafaoro, labozia ary rantsana cemara. Toa tsy vita ny iray raha tsy misy ny iray hafa. Ny fialana an-trano ho an'ny Krismasy dia mahatonga ny olona maro ho malahelo sy tsy hiady saina amin'ny fotoana iray.
Manana hetaheta, faniriana ary filàna izay tsy misy olona afaka mifanena aminy. Saingy betsaka no mitady fahafaham-po any an-toeran-kafa alohan'ny hitodihany amin'Andriamanitra - raha toa ka manao izany izy ireo. Ny faniriana trano sy ireo zavatra tsara ampifandraisintsika aminy dia tena faniriana fatratra ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy foana ny fahabangana ao am-pon'ny olombelona izay Andriamanitra irery ihany no afaka mameno. Krismasy no fotoan'ny taona toa ny olona maniry mafy izany.
Ny Krismasy sy ny ao an-trano dia mifanome tanana satria ny Krismasy dia tandindon'ny fahatongavan'Andriamanitra ety an-tany. Tonga teto an-tany izy mba ho iray amintsika mba hahafahantsika mizara ny tranontsika aminy amin'ny farany. Ao an-trano Andriamanitra - mafana fo izy, be fitiavana, mamelona ary miaro antsika, ary manitra koa izy, toy ny orana vaovao na raozy mamy manitra. Ny fahatsapana mahafinaritra rehetra sy ny zavatra tsara momba ny trano dia mifandray akaiky amin'Andriamanitra. Ao an-trano izy.
Te hanorina ny tranony ao anatintsika Izy. Mipetraka ao am-pon’ny mino rehetra Izy, ka mitoetra ao anatintsika. Nilaza i Jesosy fa handeha hanomana toerana ho antsika izy, dia trano. «Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izay tia Ahy dia hitandrina ny teniko; ary ny raiko ho tia azy, dia hankao aminy izahay ka handry ao aminy » (Jaona 14,23).
Ao aminy koa no anorenantsika ny tranontsika. “Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo” (Jaona 14,20).
Ahoana anefa ny amin'ny hoe ny eritreritra ao an-trano dia tsy miteraka fahatsapana mafana sy fampiononana ao amintsika? Ny sasany tsy manana fahatsiarovana mahafaly ny tranony. Ny mpianakavy dia afaka mamela antsika kivy na mety harary sy ho faty izy ireo. Avy eo Andriamanitra sy ny ao an-trano dia tokony hitovy bebe kokoa aminy. Tahaka ny ahafahany ho reny, ray, rahavavy na rahalahintsika, dia afaka ny ho tranontsika koa izy. Jesosy tia, mamelona ary manome toky antsika. Izy irery ihany no afaka manatanteraka ny faniriana lalina rehetra ao am-pontsika. Raha tokony hankalaza ity vanim-potoana fialantsasatra ao an-tranonao na any amin'ny trano fonenanao ity dia manaova fotoana kely hodiana any amin'Andriamanitra. Fantaro ny tena faniriana ao am-ponao, amin'ny fanirianao sy ny filanao an'Andriamanitra. Ny tsara indrindra avy any an-trano sy avy amin'ny Krismasy dia ao aminy, miaraka aminy ary amin'ny alalany. Manamboara trano ao aminy ho an'ny Krismasy ary modia any aminy.